Mauto anonziwo ave kuwanikwa pama road block ari kuiswa memapurisa mumigwagwa yemunyika.
Bato reMDC rinonzi riri kuronga kuratidzira nyika yose richida kuti hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa igadzirise zviri kunetsa munyika.
Asi mapurisa anonzi akatorambidza kuratidzira kwakanga kwakarongwa neMDC kuChinhoyi nekuMagunje kuMashonaland West.
Murongi wemisangano muMDC, VaAmos Chibaya, vaudza Studio 7 kuti vacharatidzira vachitevera bumbiro remitemo yenyika.
Studio7 yabata Mutauriri wemauto, Colonel Alphios Makotore, kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi, asi vati tiite zvekuvatumira mibvunzo netsambambozha, vachiti vanozotipindura nemusi weChishanu sezvo vanga vari kuNyanga.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, vanoti zvave kuitwa nehurumende zvekungoisa mauto pese pese zvinoratidza kuti pane zvairi kutya.
Ukuwo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti manyepo kuti mauto aiswa mumatunhu ari kuda kuratidzirwa neMDC sezvo bato iri risina rutsigiro kumaruwa kwacho zvekuti hapana vanobuda kunoratidzira.